Moa ve izany mifanaraka mpitandrina sidina?
Important Moa ve izany mifanaraka mpitandrina sidina?
1 taona 9 volana lasa izay #504 by JanneAir15
Salama! Noho izany dia nanapa-kevitra ny hividy joystick, familiana afaka mitsofoka sy throttle fanoitra. Masìna ianao, lazao amiko dia ireo mpitandrina mifanaraka? Fa raha tsy izany dia lazao inona no olana, ary azonao soso-kevitra toy izany koa avy eo? Mazava ho azy dia afaka soso-kevitra zavatra hafa mpitandrina na dia izao no mifanaraka fa noho ny vaovao aho dia te-hanana izany napetraka eo ambany 300 € Ary tsy maintsy misy telo: JOYSTICK, familiana afaka mitsofoka sy THROTTLE fanoitra.
Ireto ny mpitandrina;
- Logitech Saitek Pro Flight familiana afaka mitsofoka
1 taona 9 volana lasa izay #505 by Gh0stRider203
Azoko antoka fa mifanentana ry zareo, na raha tena te ho tsara setup, mahazo ny Saitek X55. Izany zavatra izany Epic fotsiny. MAMPALAHELO fa, fa avy ny karamako isan-karazany (fotsiny na amin'inona na dia avy amin'ny ny karamako isan-karazany amin'izao fotoana izao, indrisy ~ sighs ~)
1 taona 9 volana lasa izay #506 by JanneAir15
Ok. Kanefa mihevitra aho fa izy rehetra aho, satria mifanaraka handeha hividy Logitech Extreme 3D Pro joystick ary avy eo izy rehetra dia Logitech izay moa no moramora kokoa ry zareo avy eo, ary azo inoana kokoa mifanaraka.
1 taona 9 volana lasa izay #507 by Gh0stRider203
Nahazatra ahy ny mampiasa ny Saitek x45, fa raha nanana ny vola ... tiako SO mahazo ny X55 no Fitepon'ny Fo. Te zara raha ianao na dia tsy maintsy mampiasa ny fitendry mandritra nandositra afa-tsy ny mety hiresaka ATC.
Tapa-kazo, throttle sy ny familiana (tamin'ny tany ankoatry ny throttle) ka Te ihany no mila mampiasa ny 1 USB seranan-tsambo
1 taona 9 volana lasa izay #510 by JanneAir15
Nice setup fa tiako fa ny familiana dia fehezin'ny afaka mitsofoka ka handeha aho tamin'ny ireto:
Misaotra ny fanampiana anefa!
Fotoana mamorona pejy: 0.267 segondra